November 21, 2020 - Online Hartha
မျက်နှာပေါ်က တင်းတိပ်တွေကို ပျောက်ကင်းစေမယ့် အိမ်တွင်း နည်းလမ်းများ
မျက်နှာပေါ်က တင်းတိပ်တွေကို ပျောက်ကင်းစေမယ့် အိမ်တွင်း နည်းလမ်းများ တင်းတိပ် ဆိုတာ အရေပြားပေါ်မှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ အညိုရောင် အစက်အပျောက်များ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန် အရေပြား ပညာရှင်များ အဖွဲ့ရဲ့ အဆိုအရ ၎င်းဟာ အသားအရေ ပျက်စီးခြင်း လက္ခဏာ ဖြစ်ပါတယ်။ တင်းတိပ် ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းအရင်းများ ကတော့ နေရောင် အလွန်အကျွံ ထိတွေ့ခြင်း၊ မျိုးရိုး၊ ဟော်မုန်း မညီမျှမှု တို့ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ တင်းတိပ်တွေက မျက်နှာတင်မှာ သာမက ခန္ဓာကိုယ် နေရာ အနှံ့ အပြားမှာ ဖြစ်ပေါ်တတ် ပါတယ်။ တင်းတိပ်တွေကို ဖယ်ရှားဖို့ အထူးကုသမှုတွေ ရှိပေမယ့် ဈေးအလွန်ကြီး ပါတယ်။ ယင်းတင်းတိပ် များကို အိမ်မှာ နေရင်း သဘာဝ ကုထုံးတွေနဲ့ … Read more
၂၀၂၀ ခုနှဈ နိုဝငျဘာလ အတှကျ နသေ့ားအလိုကျ အကြိုးပေး ထီဂဏနျးမြားနှငျ့ ထီထိုးရမညျ့ အခြိနျ အပိုငျးအခွား
၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအတွက် နေ့သားအလိုက် အကျိုးပေး ထီဂဏန်းများနှင့် ထီထိုးရမည့်အချိန်အပိုင်းအခြား ထီထိုးသည့်သူတိုင်း ထီပေါက်ကိန်းရှိသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအတွက် နေ့သားအလိုက် အကျိုးပေး ထီဂဏန်းများနှင့် ထီထိုးရမည့်အချိန်အပိုင်းအခြား တနင်္ဂနွေသားသမီးများ – ခေါင်းရင်းဘက်က သီချင်းဆိုသံ ၊ သီချင်းသံ ၊ ရယ်မောသံကြားရင် ထိုးနိုင်ပါတယ် …။ မိမိနာမည်ကို နိမိတ်ကောက်ပြီးထိုးနိုင်ပါတယ် …။ ထန်းလျက်စားပြီးထိုးပါ …။ စနေနေ့ နံနက် (၉)နာရီမှ ၊ (၁၀) နာရီ (၃၀) မိနစ်အတွင် အဖြူရောင်များများပါသော အဝတ်အစားဝတ်ဆင်ပြီထိုးပါ …။ ( ၁၅ ၊ ၁၉ ၊ ၄၆ ) အတွဲ များများပါတဲ့ လက်မှတ်ကို ရှာပြီးထိုးပါ …။ တနင်္လာသားသမီးများ … Read more
အမျိုးသမီးများ အိမ်ထောင်ဘက် ရွေးပြီဆိုရင် ကြောက်စရာကောင်းသော ယောက်ျားများ
အမျိုးသမီးများ အိမ်ထောင်ဘက်ရွေးမိပြီဆိုရင် ကြောက်စရာကောင်းသော ယောက်ျားများသိဖို့ပါ… ရည်းစားတစ်ထောင်၊ လင်ကောင်တစ်ယောက် ဆိုတဲ့ စကားပုံ ကြားဖူးပါတယ်။ အမျိုးသမီးများ ရည်းစားတစ်ထောင်ထားရမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးရဲ့ အကြောင်းကို ကောင်းကောင်းမသိသေးခင်မှာ အချစ်ကို ယုံပြီး ဘဝကို မပုံအပ်သင့်ပါဘူး။ အချစ်ဦးဆိုတာ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ဇာတ်လမ်းထဲမှာ အလွန်လှပသလောက် တကယ်ညားသွားရင် သာယာတာက နည်းပါတယ်။ ဘယ်လိုယောက်ျားမျိုးကို အိမ်ထောင်ဘက်အဖြစ်ရွေးချယ်သင့်ပါသလဲဆိုတာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အကြိုက်ချင်းမတူကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အောက်ပါအကျင့်များငြိစွန်းနေတဲ့ ယောက်ျားများကိုတော့ အိမ်ထောင်ဘက်ရွေးခဲ့ရင် ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ ၁။ ကပ်စေးနှဲလွန်းတဲ့ ယောက်ျား အရပ်စကားနဲ့ နှပ်ချေးလို့လည်းခေါ်တာကြားဖူးပါတယ်။ ဒီလိုယောက်ျားမျိုးနဲ့ အတူတူ ဆိုင်မှာ တစ်ခုခုစားရင် ပိုက်ဆံပေးဖို့ လက်တွန့်တတ်တာကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ သူဟာဘယ်လောက်ချမ်းသာတယ်။ ဘယ်လို Brand တွေကို ဝတ်ဆင်တယ် စသည်ဖြင့် … Read more
သငျ့လကျမ ပုံစံက ပွောပွနတေဲ့ သငျ့ရဲ့စိတျနစေိတျထားနဲ့ ကိုယျရညျကိုယျသှေး
သင့်လက်မပုံစံကပြောပြတဲ့ သင့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လက်ပုံစံက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အကြောင်းကို အများကြီးပြောပြနိုင်ပါတယ်။ သင့်လက်ချောင်းပုံစံတွေကို ကြည့်ပြီး မှုခင်းဆိုင်ရာ ကိစရပ်တွေကိုတောင် အဖြေရှာနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လက်မမှာ လက်ဆစ်နှစ်ဆစ်သာရှိတဲ့ အတွက် ပိုမိုထူးခြားပါတယ်။ ထိုလက်မကြောင့်ပဲ ကျွန်တော်တို့ကို အခြား တိရစာန်တွေနဲ့ ကွဲပြားစေတာဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တောင်မှ လက်မပုံစံချင်းမတူညီကြပါဘူး။ ထိုသို့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကွဲပြားတဲ့ လက်မပုံစံကိုကြည့်ပြီး ထိုလူရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို အကဲဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ (၁)A အမျိူးအစား နှင့်တူသော လက်မ သင့်လက်မရှိလက်ဆစ်နှစ်ခုလုံးက တူညီနေတယ်ဆိုပါက သင်ဟာ ပျော်ရွင်မှုနဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုကို နှစ်သက်တဲ့ အေးအေးချမ်းချမ်းသမားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလက်မပုံစံရှိသူတွေဟာ များသောအားဖြင့် အေးချမ်းပြီးစကားပြောဆိုခြင်းနဲ့စာသင်ခြင်းအတတ်ပညာတွေမှာ ဆရာကျပါတယ်။သင့်မှာ ဘဝနဲ့ချီတဲ့ ဗဟုသုတတွေပြည့်ဝနေသူပါ။ သင်ဟာ ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ်ပြည့်ဝတဲ့သူဖြစ်လို့ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တိုင်း သင့်ကိုရင်ဖွင့်တိုင်ပင်ချင်တဲ့ မိသားစုဝင်တွေ သူငယ်ချင်းတွေ သင့်အနားမှာ … Read more
ပန်းရံဆရာ တွေ အကြိမ်ကြိမ် ပြုပြင်သော်လည်း ရီ နေတဲ့ပုံသာဖြစ်နေတဲ့ မကွေးမြသလွန် ဘုရားမှ ဘီလူးကြီး၏ သမိုင်းကြောင်း
ပန်းရံဆရာ တွေ အကြိမ်ကြိမ်ပြုပြင်သော်လည်း ရီနေတဲ့ပုံသာဖြစ်နေတဲ့ မကွေးမြသလွန်ဘုရားမှ ဘီလူး၏ သမိုင်းကြောင်း မကွေးမြသလွန် ဘီလူး ရီနေတဲ့ပုံရဲ့ သမိုင်းကြောင်း ကတော့ ဒီလိုတော့သိတယ် ဘီလူး က ၆ ကောင်ပါ ဘီလူးမနှစ်ကောင် ကိုချန်လှပ်ထားတယ် သမိုင်း မှာ ဘောသော ဘောကျော် ဘောသူရာ ဘောရသ ဘီးလူး လေးကောင် တို့သည် ဘုရားထံမှရတဲ့ မြသပိတ် နဲ့ မြသလွန် ဘုရား ဗျာဒိတ်ပေးတဲ့နေရာမှမတည်ပဲ ဘုရားပြိုအရပ်မှာတည်တာကို သိကြားမင်းသိတော့ ဝရဇိန်လက်နက်နဲ့ဖြိုခွင်းပြီး မြသလွန် နဲ့ မြသိပိတ် ကိုယူကာ ဘုရား သုံးဆူတောင်မှ ရသေ့ညီနောင်သုံးပါးထံအပ်တယ် . ဘီလူး ဘောကျော် လူဝင်စားဖြစ်မှ ဘုရား တည်ခွင့်ပေးဖို့ မှာကြာလေတယ်။ ဘီလူး ဘဝမှ စုတေကြပြီး ဘောကျော်လူဝင်စားဖြစ်လာတဲ့အချိန် … Read more
ကြွက်တွေ တကယ်ပြေးလို့ ပြန်လည်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်…ကြွက်ပြေးစေတဲ့နည်းလမ်းကောင်း
ကြွက်တွေ တကယ်ပြေးလို့ ပြန်လည်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ် ‘ကြွက်တွေပေါနေရင် ကြွက်ပြေးသော ဒါဏ်ကြေလိမ်းဆေး ကြွက်တွေ တကယ်ပြေးလို့ ပြန်လည်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ် ‘ကြွက်တွေပေါနေရင် ကြွက်ပြေးသော ဒါဏ်ကြေလိမ်းဆေး ကြွက်ပြေးသော လင်ဇီးဒါဏ်ကြေလိမ်းဆေး ကြွက်တွေက ပေါလိုက်တာ့ ပေါတာမှ စာအုပ်တွေကိုက် အဝတ်တွေကိုက့် ညကျတော့ တစ်ဝုန်းဝုန်းနှင့်လိုက်တမ်းပြေးတမ်းကစားကြ့ ကျိန်းမရအောင်ဖြစ့် တစ်ကောင်နှင့်တစ်ကောင်လှမ်းအော်ကြ့ တစ်ခါတလေများဆို ပြေးရင်းလွှားရင်းခြင်ထောင်အမိုးပေါ်ဒိုင်ဘင်ထိုးချ့ လွန်တာမှအတော်လွန့်အဲ့ဒါနှင့်ကလေးတွေက ထောင်ချောက်ထောင်မယ်လျှောက်တယ့် မလုပ်နှင့် ဆေးကျွေးမယ်ဆိုတယ့်လုံးဝမလုပ်နှင့်ပေါ့…. အဲ့ဒါနှင့်တစ်နေ့ကျတော လက်မောင်းအောင့်လို့လင်ဇီးဒါဏ်ကြေဆေးလိမ်းတယ့် ပူလိုက်တာ့.. အခိုးကလည်း မွှန်ပြီးမျက်ရည်ကျတယ့် လူတောင်အနံ့ခိုးရတာနှင့်မျက်ရည်ကျရတယ် ဟိုအကောင်တွေ(ကြွက်)ဆိုဘယ်လိုနေမလဲမသိ့ သူတို့နှာခေါင်းကရှေ့ရောက်နေတာဆိုတော့ ပိုပြီးအနံ့ရမှာပဲဆိုပြီးစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့ ဆိုတော့ကျောင်းသားသုံးယောက်ခေါ် ကြွက်လာလမ်း လျှောက်လမ်းတွေ လင်ဇီးတွေ ထူထူသုတ်ပြီးအသာနေလိုက်တာ့ ည(၁၀)နာရီလောက်ကျတော့ သောင်းကျန်းဖို့လာနေကြအချိန်အတိုင်း ကြွက်တစ်အုပ်ရောက်လာပါရော့ ရှေ့ဆုံးကအကောင်က သုတ်ထားတဲ့လင်းဇီးနှင့်နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့တွေ့ပြီးကြမ်းပြင်ပေါ်ပြုတ်ကျ့… သူ့ပါးစပ်ကအော်ချင်တာအော်ပြီး ထွက်ပြေးအဲ့ဒီလိုနှင့်နှစ်ကောင်သုံးကောင်လောက်ဖြစ်ရော.. နောက်ကကြွက်တစ်အုပ်ရှေ့ဆက်မတက်ပဲ အသိုက်ပါပြောင်းတယ်ထင်ပါရဲ့… ခုဆိုကြွက်တွေလာမသောင်းကျန်းတာသုံးရက်ရှိပြီ….. ကျေးဇူးပါလင်ဇီ်းရေ့ သူ့အသက်မသေပဲ … Read more